musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » Hawaii Zororo Rentals: Zvirinani, Asi Kwete Ikoko Kwazvo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
KuHawaii zororo rendi dzakashuma kuwedzera kwese mukupa, kudiwa, kugara uye paavhareji zuva nezuva zviyero zvichienzaniswa ne2020, asi zvakasara kumashure kweyakaitika pre-denda iyo yakataurwa kwehafu yekutanga ye2019.
MunaJune 2021, huwandu hwese hwemwedzi hwekupa zororo repasirese repasirese hwaive 591,100 mauniti usiku
June 2021 kudiwa kwemwedzi pamwedzi kwaive 472,100 mayuniti eusiku.
June 2021 avhareji pamwedzi yeyuniti yekugara yaive 79.9 muzana.
KuHawaii zororo rendi nyika yose yakaratidza kuwedzera kwakanyanya mukuwaniswa, kudiwa, kugara uye paavhareji zuva nezuva (ADR) munaJune 2021 zvichienzaniswa naJune 2020. Zvisinei, kana tichienzanisa naJune 2019, mari yekubhadhara zororo, kudiwa uye ADR zvaive pasi apo kugara kwacho kwakakwira zvishoma kudzikisira pamatanho ekupa.
Saizvozvowo, kuburikidza nehafu yekutanga ya2021, zvivakwa zvekuHawaii zvakaburitswa zvakaratidza kuwedzera kwakawanda muzvikamu zvakafanana zvekuita zvichienzaniswa ne2020, asi zvakasara kumashure kweyakaitika pre-denda yakashumwa yehafu yekutanga ye2019.
Iyo Hawaii Tourism Chiremera (HTA) yakaburitswa nhasi iyo Hawaii Vacation Rental Performance Report yemwedzi waChikumi uye hafu yekutanga ya2021 ichishandisa dhata rakanyorwa neTransparent Intelligence, Inc.
MunaJune 2021, huwandu hwese pamwedzi hwekubhadharwa kwepasirese kwepasirese yaive 591,100 yuniti husiku (+ 74.1% vs. 2020, -32.9% vs. 2019) uye kudiwa kwemwedzi nemwedzi kwaive 472,100 mayuniti eusiku (+ 910.6% vs. 2020, -27.1% vs. . 2019). Izvo zvakaguma neavhareji pamwedzi yuniti inogara ma79.9 muzana (+66.1 muzana poindi vs. 2020, +6.3 muzana poindi vs. 2019) munaJune, iyo yaive yakati kwirei kupfuura kugara kwemahotera eHawaii (77.0 muzana).
Iyo ADR yemahotera emahotera emahara nyika yakawedzera muna Chikumi kusvika pa $ 242 gore-pamusoro-gore (+ 17.0% vs. 2020, -29.9% vs. 2019), asi yanga ichiri yakaderera zvakanyanya pane iyo ADR ye $ 346 muna Chikumi 2019. ADR yemahotera yaive madhora mazana matatu nemakumi mairi muna Chikumi 320. Zvakakosha kuziva kuti kusiyana nemahotera, zvikamu mumaroja emahotera, nzvimbo dzekuchengetera nguva uye mahotera emakondomu hazviwanzo kuwanikwa gore rese kana zuva rega rega remwedzi uye kazhinji zvinokwana kuwanda kwevaenzi kupfuura dzimba dzechinyakare dzehotera.
MunaJune, mareti epamutemo epfupi-pfupi akabvumidzwa kushanda muMaui County uye kuOahu, Hawaii Island neKauai sekureba sekunge ivo vaisashandiswa senzvimbo yekuisa vanhu.
Kuiswa kwega kwega kwevaHawaii kwevafambi nekuda kwedenda kwakatanga munaKurume 26, 2020, izvo zvakangoerekana zvave nemhedzisiro inokanganisa indasitiri yeHurumende yekushanya. Mukati maJune 2021, vafambi vazhinji vanosvika kubva kunze kwenyika uye vanofamba pakati-mudunhu vanogona kupfuura zvinotenderwa neHurumende kwemazuva gumi kuzvisarudzira neyakavimbika mhedzisiro yeECVID-10 NAAT bvunzo kubva kune Anovimbwa Kuedzwa Partner vasati vaenda kuHawaii. kuburikidza nepurogiramu Yakachengeteka. Pamusoro pezvo, vanhu vakabaiwa jekiseni muHawaii vaigona kudarika mutemo wekuisa vanhu voga kutanga musi waChikumi 19, 15. Zvirango zvekufamba pakati-kumatunhu zvakasimudzwa zvakare saJune 2021, 15.
Iyo data iri muHTA yeHawaii Vacation Rental Performance Report inonyanya kusanganisa zvikamu zvinotaurwa muHawaii Hotel Performance Report uye yayo Hawaii Timeshare Quarterly Survey Report. Kubhadhara zororo kunotsanangurwa sekushandiswa kweimba yekurendesa, makondomu unit, yega imba mumba mega, kana yakagovaniswa kamuri / nzvimbo mumba mega. Chirevo ichi hachigadzike kana kusiyanisa pakati pezvikwata zvinotenderwa kana zvisina kubvumidzwa. Nhaurwa yechero ipi yakapihwa yeti yekurendesa yuniti inogadziriswa padunhu.